SEKOLIN’NY ZANDARIMARIA AMBOSITRA :: Manamboninahitra iray voarohirohy nanolana mpianatra • AoRaha
SEKOLIN’NY ZANDARIMARIA AMBOSITRA Manamboninahitra iray voarohirohy nanolana mpianatra
Avy hatrany dia nosamborina ny manamboninahitra lietna iray voarohirohy ho nanolana mpianatra vehivavy iray tao amin’ny Sekolin’ny Zandarimaria, tany Ambositra, tamin’ny alahady lasa teo. Hatolotra ny Fitsarana anio izy. Ny alin’ ny sabotsy no voalaza fa nanaovan’io manamboninahitra io ny filan-dratsiny tamin’ilay mpianatra.
“Vao nitranga io raharaha io tamin’ny alahady maraina rehefa naheno ny teto anivon’ ny Zandarimaria dia nanome baiko avy hatrany ny hanokafana ny famotorana. Nosamborina teny amin’ny sekoly ilay olona voarohirohy, ka noentina teny amin’ny Vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Amoron’i Mania natao famotorana. Mbola voatazona eny izy hatramin’izao miandry ny fanolorana ny raharaha ny Fitsarana. Momba ilay mpianatra niharam-boina indray dia nisy ny fandraisana an-tanana nataon’ny Zandarimaria taminy toy ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamany, ny fandraisana an-tanana ny lafiny ara-tsaina. Misy ihany koa ny fanaraha-maso akaiky atao aminy hiandraiketan’ny manamboninahitra iray mihitsy”, hoy ny fanampim- panazavana avy amin’ny tompon’andraikitry ny Sekolin’ny Zandarimaria any Ambositra.
Salama ary afa-manaraka tsara ny fiofanana eo anivon’ny sekoly io mpianatra vehivavy io taorian’ity tranga ity. Araka ny loharanom-baovao hafa avy any an-toerana dia isan’ireo ranjanana sady manana toe-batana afaka hiatrika ny fiofanana rehetra eo anivon’ny sekoly izy.
Rongony avo lenta
Trano 25 may
Lozam-pifamoivoizana Atahorana ny ain’ilay Gineana iray naratra mafy
ASAN-JIOLAHY :: Lasan’ny mpaka an-keriny ny mpivady sy ny zanak’izy ireo iray
AHIAHINA FIRAISANA TSIKOMBAKOMBA :: Zandary telo sarona nifandray tamina dahalo namono ny namany